भेरी अस्पतालमा चिकित्सकमाथि आक्रमण, झ्यालबाट हाम्फालेर ज्यान बचाए
काठमाडौं । बाँकेको भेरी अस्पतालमा बिहीबार राति चिकित्सकमाथि आक्रमण भएको छ । उपचारका क्रममा एकजना संक्रमितको मृत्यु भएपछि मृतकका आफन्तले चिकित्सकमाथि आक्रमण गरेको अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेट डा. प्रकाशबहादुर थापाले अनलाइनखबरलाई बताए ।
‘बिहीबार राति करिब ८ बजेको थियो होला । सिप्याप भेन्टिलेटरमा उपचाररत दाङका ५४ वर्षीय संक्रमितको मृत्यु भयो । उनको अवस्था गम्भीर थियो । उनको स्वास्थ्यमा सुधार आउन सकिरहेको थिएन,’ डा. थापाले भने, ‘चिकित्सकहरुले उनलाई बचाउन हरसम्भव प्रयास गरिरहेका थिए । अन्ततः उनको मृत्यु भयो ।’
उनको मृत्यु पछि मृतकका आफन्तले अस्पतालमा तोडफोड गर्दै चिकित्सकहरुमाथि आक्रमण गर्न थालेपछि ४ जना चिकित्सक भने झ्यालबाट तल्लो तलामा हाम्फालेर ज्यान बचाएको उनले बताए । आक्रमणबाट बच्न भागेर ट्वाइलेटसम्म पुगेका केही चिकित्सक तथा नर्सलाई भने उनीहरुले लखेटिलखेटी आक्रमण गरेको थापाको भनाइ छ ।
उपचारमा संलग्न डाक्टर, नर्ससहित ६ जना स्वास्थ्यकर्मीमाथि उनीहरुले आक्रमण गरेको डा .थापाको भनाइ छ । उनीहरुले पीपीई लगाएका नर्सहरुको घाँटी निचोर्ने, लात हान्ने लगायतका अमानवीय व्यवहार प्रदर्शन गरेको थापाले बताए ।
चिकित्सकमाथि आक्रमण भएसँगै अहिले अस्पतालका वातावरण त्रसित रहेको उनले बताए ।
चिकित्सकमाथि चारजनाको समूहले आक्रमण गरेको भएपनि दुईजनालाई मात्रै प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको उनले बताए ।
थापाका अनुसार ज्यानको बाजी लगाएर, पानी समेत नखाइ बिरामीको सेवामा निरन्तर खटिँदा समेत आफूहरुमाथि भौतिक आक्रमण भएको भन्दै चिकित्सकहरुले सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति नभएसम्म काममा नखटिने बताएका छन् ।
सुरक्षाको प्रत्याभूति हुनुपर्ने, आक्रमण गर्ने समूहमाथि कडा भन्दा कडा कारबाही हुनुपर्ने माग चिकित्सकहरुको छ ।
चिकित्सकमाथि आक्रमण भएपछि अहिले अस्पताल प्रशासन, नेपाल मेडिकल एसोसिएसन लगायतको सहभागितामा आकस्मिक बैठक बसिरहेको उनले बताए ।अनलाइन खबरबाट
२०७८ जेष्ठ १४, शुक्रबार ००:४४0Minutes 75 Views